Kuyini ukubanda okubandayo? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMonica sanchez | | Amagagasi abandayo
Siyazi ukuthi yini ukubanda okubandayo okuyikho ngempela? Manje, lapho cishe lonke elaseSpain libhekene nesimo sezulu esifana nobusika, kuyathakazelisa ukwazi ukuthi yini le nto nokuthi ivela kanjani.
Ngakho-ke, ake sazi kabanzi nge-snap ebandayo.
3 Kucatshangwa ukuthi igagasi elibandayo lithinta nini iSpain?
4 Izindlela zokuvikela
Isifinyezo esibandayo yi- into okushisa ngayo umoya wehla kakhulu ngenxa yokuhlasela komoya obandayo. Lesi simo sihlala isikhathi esingaphezu kosuku futhi singakwazi ukumboza amakhulu noma izinkulungwane zamakhilomitha-skwele.
Yebo, kunezinhlobo ezimbili:
Izindimbane zomoya wePolar (igagasi le-polar, noma igagasi elibandayo) akhiwa phakathi kwama-55 nama-70 degrees wokuphakama. Ngokuya ngokuthi bayaphi, bazothola ushintsho oluthile noma okunye. Isibonelo, uma beya ezindaweni ezinamazinga okushisa afudumele, bazofudumeza futhi, ngokwenza njalo, bazohlala bengazinzile, ngaleyo ndlela bathande ukwakheka kwamafu emvula ohlobo lwesiphepho; Ngakolunye uhlangothi, uma beya ngasolwandle iAtlantic nePacific, umoya uzolayishwa umswakama futhi lapho behlangana namanzi ahlanzekile, amabhange enkungu noma amafu emvula ayokwakha lokho kuzoba buthakathaka.
Inqwaba yomoya wase-Arctic nase-Antarctic noma waseSiberia: zivela ezindaweni eziseduze nezigxobo. Zibonakala ngamazinga okushisa aphansi, ukuzinza okuphezulu, kanye nomswakama ophansi, ngakho-ke amafu ayindlala. Imvamisa azivezi ukuwa kweqhwa okusindayo ngaphandle kokuthi badlule i-Atlantic Ocean, ngoba ngokwenza njalo baba nokungazinzi.
Kucatshangwa ukuthi igagasi elibandayo lithinta nini iSpain?
ESpain le mingcele elandelayo isunguliwe:
Izinga lokushisa kufanele lehle ngo-6ºC okungenani emahoreni angama-24. Ngokuya ngendawo, izinga lokushisa eliphansi kufanele libe linye noma elinye:
Ogwini lwasenhlonhlo, iBalearic Islands, iCeuta neMelilla izinga lokushisa eliphansi kumele lifinyelele emkhawulweni we-0ºC.
Ezindaweni eziphakemeyo ziphakathi kwezinga lolwandle namamitha ayi-200, izinga lokushisa eliphansi kumele lifinyelele embundwini ophakathi kuka-0 no -5ºC.
Ezindaweni ezinokuphakama okuphakathi kwamamitha angama-200 kuya kwangu-800, izinga lokushisa eliphansi kumele lifinyelele embundwini ophakathi kuka -5 no -10ºC.
Ezindaweni ezinokuphakama okuphakathi kwamamitha ayi-800 kuye kwayi-1200, izinga lokushisa elincane kumele lifinyelele embundwini ongaphansi kuka -10ºC.
Ngokuphakama okuphezulu, imibundu ayikasungulwa ngoba abantu bacatshangelwa ukuthi bayayijwayela, noma akuyona indawo enabantu abaningi.
Ukugwema izinkinga, Kubaluleke kakhulu ukuthi uzivikele emakhazeni ngokugqoka izingubo ezishisayo, uma kungenzekaUkugqoka amabhulukwe, ijezi nejakhethi kuzokwanela kunokugqoka izingcezu eziningi zezingubo, okungenzeka kungakuphathi kahle. Ngokunjalo, kubalulekile ukuvikela intamo nezandla, ngoba uma kungenjalo singagcina sinemikhuhlane ngesikhathi esincane kunalokho esicabanga. Uma sigula, kufanele siye kudokotela futhi sigweme ukuphuma ngaphandle size silulame.
Uma kwenzeka kufanele uthathe imoto, kufanele ubone ukuqagela kwesimo sezulu futhi uthole nokusetshenziswa okungenzeka kwamaketanga, ikakhulukazi uma kufanele udlule noma uye ezindaweni lapho kuneqhwa khona.
Siyethemba ukuthi le ndatshana ibilusizo kuwe 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi abandayo » Kuyini ukubanda okubandayo?